PressReader - Isolezwe: 2018-05-18 - Zizosiza umphakathi izitshudeni ezixhasiwe
Zizosiza umphakathi izitshudeni ezixhasiwe
Isolezwe - 2018-05-18 - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE
IJAZI LIGCWALE UMOYA KU-TEFU NONKHATHA
Sfiso Lindokuhle: Uyena muphi uTefu, ilona owayegoloza ukuvuselela inkontileka neKaizer Chiefs, manje usehamba elahlwa nje.
Angus Mbatha: UMashamaite madoda, ukube wahlala kuChiefs ngabe simbiza ngomdlali omnkantshubomvu kuMakhosi namhlanje.
Sanerh Ndoh Mbhelerh: Vele selokhu bafika akukho okungakanani abakwenzele iSSU. UBABES WODUMO UCHITHA EYOKUKHULELWA Xolani Mzukulu kaManyosi Shandu: Ngeke aze avume vele, osaziwayo bavele baphike into isobala, usaziwayo angaphika umbala omhlophe ewubona ukuthi umhlophe kodwa athi umnyama, sesiyabazi. Cxolile The-Legacy Kubi yini ukukhulelwa? Mgcine: Yini engamvimba uma eseno Mampintsha?
u’Sanele Khanyile: Kunani uma ezithwele? Unayo imali yokunakekela ingane vele, kunalaba abayishaya phansi benganaTWA. UDILIKAJELE KODLWENGULE UMSHANA ETHUNYIWE
Sanerh Ndoh Mbhelerh: Hhayi cha, asemancane amadoda aqotho eNingizimu Afrika. Siyabonga ngoba ukutholile okumfanele.
Xolani MzukulukaManyosi Shandu: Umfanele udilikajele lowo.
KUZODINGEKA zenze imisebenzi yokusiza umphakathi uma seziphothule iziqu izitshudeni ezifunda mahhala ngokuxhaswa wuhulumeni emanyuvesi.
Lokhu kuvezwe nguNgqongqoshe weMfundo ePhakeme, uNkk Naledi Pandor, ethula isabelo sezimali somnyango wakhe eKapa, izolo.
UNkk Pandor uthe izitshudeni abazali bazo abahola ngaphansi kukaR350 000 ngonyaka bazofunda mahhala.
“Kunemibandela ebekiwe yokuthi izitshudeni ezenza unyaka wokuqala ezithola imfundo yamahhala, ziphase ziphinde zenze imisebenzi yomphakathi. Lokhu ngenye yezinto ezibekiwe ukuze zixhaswe,” kusho uNkk Pandor.
Uthule isabelo sezimali sika-R89.9 billion salo nyaka, ingxenye enkulu yaso izoya koxhasa amanyuvesi ngoR38.6 billion.
INational Students’ Financial Aid Scheme yabelwe uR20.5 billion, uhlelo lokuthuthukisa amakhono ngoR16.9 billion kwathi amakolishi amakhono abelwa uR10.7 billion.
Uthe luyaqhubeka uhlelo abaluhlolayo olwaziwa ngeKusasa Students Financial Aid lokuxhasa izitshudeni ezingaphezu kuka-5 000 emanyuvesi awu-12 nekolishi elilodwa.
Uthe eminyakeni emithathu ezayo izonyuka imali okuxhaswa ngayo amanyuvesi ngoba yiwona anengcindezi yokwanda kwesibalo sezitshudeni.
Uthe izikhungo ezazincishwe amathuba phambilini zizokwesekwa ngoR2.5 billion.
UNkk Pandor uthe uhlelo lomfundaze lwezitshudeni zasemakolishi, olunikwe uR5.2 billion, luzozuzisa eziwu-458 000.
“Sesiyanda isibalo sentsha engena emakolishi, maduzane sizokwanda isibalo sama-artisan, neminye imisebenzi. Sizokwethula izinhlelo emakolishi awu-26 azogxila emikhakheni ebalulekile neshodayo. Sizozihlola iminyaka emibili ukuze sandise isibalo samakolishi.”
Uthe iNational Skills Fund izokhipha uR150 million ukwandisa amakhono.
Umemezele ukuthi bayakwamukela ukuphothulwa komsebenzi emakolishi amabili eBambanani naseNkandla KwaZulu-Natal.
“Sibeke uR934 million wokusiza abasebenzi basemanyuvesi bazithuthukise. Sizokweseka abasebenzi nabaphathi bamanyuvesi bathuthukise izinhlelo zezikhungo zabo.”
Uthe kunohlelo abalwenza ngokuhlanganyela ne-United States lodokotela olufaka amanyuvesi awu-12 ase-USA nawu-18 akuleli ukuze abasebenzi abawu-100 bakwazi ukuthola iziqu zobudokotela.
Lolu hlelo uthe lwabelwe uR57.2 million. Uthe imali izosiza ekutheni kuguqulwe uhlelo lokufunda enyuvesi yaseStellenbosch, ematasa yenza izinguquko ezinhlelweni eziyishumi zokufunda okubalwa ezobudokotela nezomthetho.